Chipfeko cheDutch, ndizvozvo | Absolut Kufamba
Holland ndeimwe yeaya nyika iyo munhoroondo uye mutsika inotipa isu yakakura zvechinyakare uye zvekuda kuziva zvinhu nezve izvo kuda kuziva kunogara kuchimutswa. Nyika yeNetherlands haina chitauro chetsika, kunyange ichitipa iyo kusanganiswa kwezvipfeko zvakasiyana zviri mukati matunhu akasiyana eNetherlands
Iyo inonyanya kuzivikanwa inozivikanwa se sutu "Nditendeutse", Inosanganisira siketi nhema, epuroni yakabviswa, shawl uye ngowani yetambo, pamwe nezvimwe Shangu dzematanda (Klompen) ndizvo zvinotendwa nevanhu vazhinji kana kufunga kuti ndiwo mapfekero echinyakare eHolland nedzimwe nyika.
1 Zvikamu zvezvipfeko zveDutch zvinoitika
2 Kraplaps: maitwa sei
3 Nguva yeskirt yacho
4 Shangu dzezvipfeko zvechivanhu izvi
Zvikamu zvezvipfeko zveDutch zvinoitika
Sei sutu ye "Volendam" ichizivikanwa zvakadaro? Vanhu vazhinji vanofunga nezvazvo koshitomu Volendam pavanofunga nezveHolland kana neNetherlands. Iyi ndiyo koshitomu inodzokororwa mumhando dzese dzemazita ari pasi pe'Dutch Maid ', ine kapu yepamusoro nemapapiro. Muchokwadi, sutu yacho inongopfekwa mukati guta re Volendam, uye haisi inomiririra kana yakajairika yeNetherlands izere, zvisinei inozivikanwa kwazvo.
Pane matatu akasiyana sutu, saka ungangodaro wakashamisika kuti sei uchizviona mumifananidzo yakasiyana kuti ivo havatarise zvakafanana. Haisi sutu yezuva rega rega, kana sutu yakasarudzwa kuenda kumusika neSvondo, asi ndiyo sutu yezviitiko zvakakosha, inova ndiyo inowanzoonekwa mazuva ano.
Kune a mhando yesutu inonzi 'Bruiloftsgast'kana' muenzi wemuchato 'koshitomu. Ndiyo inozivikanwa sehembe, iyo isina maoko uye siketi. Chipfeko chetsika chakada kureba makumbo. Camisole haina kuratidzwa kana koshitomu yapera. Pamusoro pe camisole a 'kraplap', inonziwo'koplap''kralapkana 'kroplap', mhando yeiri bhibhi, yakafanana neyechishongedzo zvakare inowanikwa mune zvimwe zvipfeko zveGerman. Inosunga pamutsipa uye inosungirirwa pazasi nemaribhoni pamberi pepaneru neshinda kuburikidza nezvishwe zvakasungirirwa kuseri kwepaneru.
Kraplaps: maitwa sei
El kraplap inowanikwa mune zvipfeko zvakawanda zvechiDutch, sezvo inowanzo shongedzwa nenzira inobudirira kwazvo, sezvo ivo vachigona kuvezwa kana nejira rakadhindwa rine zvishongo zvakasiyana. Izvo zvinogadzirwa muzvidimbu zviviri, kumberi nekumashure, rimwe bendekete rakasonwa rakavharwa, uye rimwe riine fixation. Pane chidimbu cheribhoni kana tambo yakakomberedza mutsipa kuvhura. Mazuva ano, the kraplap Kazhinji ine ruva dhizaini satin yakasona mushini wakashongedzwa, kazhinji maruva.
Kuma 1930, imwe mhuri yakatumidzwa zita rekuti Tol yakagadzira chimiro chemishini yekupenda yekupenda maRose dhizaini pasilika kumashure vachishandisa akateedzana stencils; Izvi zvinoita kunge mutungamiriri wemuchina wekushongedza unoshandiswa nhasi kuita gadzira iyo kraplaps.
Nguva yeskirt yacho
Iyo siketi inozoiswa, jena uye tsvuku mitsetse siketi yesutu inozivikanwa se 'muenzi wemuchato', zvikasadaro siketi refu mune rakasviba rakasviba, kazhinji kazhinji dema kana navy bhuruu.
Vakadzi mu pezvitsiga, mamaira mashoma kubva kuVolendam, vanopfeka siketi ine mitsetse yakafanana, asi vanogara vari pasi la topskirt. Pamusoro peiyi siketi, icho chinozivikanwa se'kletje 'chakapfekwa, bhuruzi dema remvere kana bhachi kuseri, uye paupamhi pezeve nzeve kumberi. Iyo inoratidzira mativi akachekwa mutsipa kumberi nekumashure, iyo yakagadziriswa pamwe nekukodzera; chikamu chepamberi chinovhara nezvikorekedzo.
Shangu dzezvipfeko zvechivanhu izvi
Klompen, kana shangu dzemuti, ndiyo inozivikanwa tsika yechiDutch, sezvakaita tulips nemagirosi emhepo. Shangu yekare yemapuranga yakambowanikwa yakawanikwa muAmsterdam muna 1979 uye yakatanga kusvika muna 1230 AD Bhutsu dzaidhura uye dzaipfekwa chete nevapfumi kuchengetedza tsoka dzavo uye kuratidza kuti vaikwanisa kuwana humbozha hwakadai. Klompen, shangu yemuti yaive yakachipa, yakachengeteka imwe kune shangu dzakasonanidzwa nemaoko.
Shanduro dzekutanga dze shangu dzemapuranga dzaive nehuni chete uye ngowani dzematehwe, zvisinei, pakupedzisira bhutsu yese yakagadzirwa nematanda kudzivirira zviri nani tsoka, sevanhu vazhinji vaidzifuka vaive vabati vehove, varimi nevashandi vefekitori sezvo vachipa chinodzivirira panjodzi dzakadai sehuku dzehove, zvipikiri nezvimwe zvakapinza. zvinhu. Havagone kushandiswa kuenda kuchechi kana mukati memba, asi vanogona kushandiswa kuenda kumimwe mitambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Madhirezi echiDutch, ndizvozvo
Pindura kuna dayan
hahahajajjjajjajjajajajajajaja hahaha baba avooo havatendi oooooo havana kumbobvira vawana izvi
oooogan ndiri josti n hanzvadzi ya biber ini ndine mukurumbira hahaha baba vaye ihanzvadzi yajostin biber yyy iwe nononon hahahahahaha iwe nonononononono hahahaha
zvese zvakanaka, usakurukura nyika dzese dzakanaka, usakurukura nezvadzo, enda kune rugare, runyararo rwakawanda
Ndinoda mazano enyu
Pindura kuna jessica
Sei vanhu vazhinji vachitaura zvakashata mutsika dzavasingazive?
juan mapijama akadaro
haindishandire nekuti haina zita racho
Pindura kuna juan pajamas
Asi ini ndinomirira uye ndotenga mapyjama aJuan nekuti anodziya sooo ndinovimba ndoatenga, anotengeswa muUruguay, enda online wotarisa zvako!
Zvakaipa pane zvimwe zvakataurwa. Ini ndinofunga ipfupi kwazvo, ndinoda kuziva kana vachiri kupfeka zvakajairika zvipfeko zvemichato kana mapato.
mujica zvakajairika akadaro
zvese zvakanaka kwazvo nezveHolland, ndaizvida. tsika yavo yese uye madhiri avo, ndinovimba vane mutsa pavanoshanyirwa uye havavenge vekunze, nekuda kwevara ravo kana mabviro ... kutsvoda
Pindura kuna norma mujica